Izimila zinethonya lama-30% emvuleni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izimila ezindaweni eziphila kuzo zinemisebenzi ehlukahlukene, njengokugcina zonke izinto eziphilayo ezincike kuyo nokunikeza ukudla. Ziphinde zikhiqize umoya-mpilo esiwuphefumulayo ngenqubo ye-photosynthesis.
Manje, ngokubaluleke kakhulu, Izimila zitholakale zinethonya elikhulu esimweni sezulu. Isimo sezulu sendawo singahlotshaniswa kanjani nohlaza olukhona?
Isimo sezulu nohlaza
Ososayensi abafunde ngalesi simo bathole izingqinamba ezinamandla phakathi komkhathi nezimila. Lokhu kubuyiselwa emuva kunethonya elikhulu emvuleni nasezimweni zemisebe ebusweni futhi, ngakho-ke, zinomthelela esimweni sezulu sendawo. Izimila zibhekele ama-30% okwehlukahluka kwezulu nemisebe yezigameko ebusweni.
Lezi zifundo zingasiza ekuthuthukiseni ukubikezela kwesimo sezulu, ngoba ngokwazi uhlaza lwendawo nomthelela wayo, kungakhiwa izinhlobo zokubikezela ezingcono zamazinga okushisa nemvula. Lolu cwaningo, ngokwazi abalobi balo, owokuqala ukuhlola ukusebenzisana kwe-biosphere-atmosphere esebenzisa idatha yokubuka kuphela, futhi kungathuthukisa kakhulu isimo sezulu nesimo sezulu esibalulekile ekuphathweni kwezitshalo zezolimo, ukutholakala kokudla, ukuhlinzekwa ngamanzi, isomiso kanye namagagasi okushisa.
Siyazi ukuthi uhlaza lungathinta isimo sezulu nesimo sezulu ngokukhipha umhwamuko wamanzi ngesikhathi senqubo ye-photosynthesis. Lokhu kudedelwa komphunga wamanzi emoyeni kushintsha ukugeleza kwamandla ebusweni futhi kuthuthukise ukwakheka kwamafu. Ngenxa yalawo mafu, imvula iba khona. Ngakho-ke izimila zibalulekile ukuze umbuso wemvula uhlale uzinzile.
Ngaphezu kwalokho, amafu nawo aguqula inani lokukhanya kwelanga, noma imisebe, engafinyelela ebusweni bomhlaba, kuthinte ukulingana kwamandla eplanethi, futhi ezindaweni ezithile lokhu kungaholela emvuleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izimila zinethonya lama-30% emvuleni